Koeman oo dhaleeceeyay shaqsiyadda ciyaartoyda Barcelona kaddib guushii ay ka gaareen kooxda Cornella – Gool FM
(Barcelona) 22 Jan 2021. Tababaraha kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa la weydiiyay sababta ciyaartoydiisa aysan uga faa’ideysan Karin fursadaha ay ku dhalin karaan goolal.
Dhinaca kale macalinka reer Holand iyo kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa carabka ku adkeeyay inaysan caqli gal aheyn inay labo rigoore ku lumiyaan hal kulan.
Barcelona ayaa si dirqi ah ugu soo baxday wareega siddeeda ee tartanka Copa del Rey kaddib markii ay 0-2 kaga soo adkaadeen kooxda Cornella, xilli la ogsoon yahay in kulankan loo baahday in lagu daro waqti dheeri ah, maadaama waqtigii loogu talagalay uu ku dhamaaday barbardhac 0-0 ah.
Ciyaarta kaddib tababare Ronald Koeman ayaa la hadlay warbaahinta wuxuuna yiri:
“Waxaan helnay fursado nagu filan oo aan goolal ku dhalin karnay, waxaana iska luminay laba rigoore, waxaan nahay Barcelona, ​​waa inaan yeelano shaqsiyad aan ku guuleysan karno xilli hore.”
“Ma fahmin sababta aan fursado badan u luminayno, laga yaabee inay tahay cabsi darteed, ma jiro cadaadis ku saaran marka aad tuureyso rigoorada, ma joogaan taageerayaasha, waa inaad isdajiso.”
“Ciyaaryahan ahaan kooxda Barcelona ma lumin kartid laba rigoore, waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn, oo aad uga fog Messi, waa inaan horumarinaa dhankaan.”
“Cornella waxay ciyaartay ciyaar aad u wanaagsan goolhayahooduna waa kan ugu fiican, laakiin waa inaan isweydiino sababta aan markale u ciyaareyno 120 daqiiqo.”
“Kuma farxi karno guushii aan gaarnay, waxaan khasaarinay fursado badan oo ay ku jiraan labo rigoore, waxaan dheelnay waqti dheeri ah kulankii saddexaad oo xiriir ah, waa inaan aad ugu dagaalanaa goolka hortiisa.”